Pellets ho loharanon'ny angovo | Fanavaozana maintso
Adriana | | Biofuel, Biomassa, Angovo azo havaozina
El bala Izy io dia vokatra azo avy amin'ny hazo, izay zakaina ho granulate, ary ampiasaina ho solika.
Loharano ity hafanana sy herinaratra azo havaozina tena ekolojika satria tsy mampandroso fandripahana ala satria ny reside hazo dia ampiasaina hanamboarana pellet fa tsy hazo na rantsana lehibe.
Ny pellets hazo dia ampiasaina ho toy ny fampidirana ao amin'ny zavamaniry herinaratra mafana, fa koa hanamafisana ny fampiasana ao an-trano miaraka amin'ny fatana fandoroana roa na amin'ny vata indostrialy na fitaovana hafa.
Misy karazana pellet isan-karazany ka miovaova ny vokatra kaloria amin'ny karazana hazo tsirairay. Fa amin'ny ankapobeny dia manana sanda kalorika avo izy io.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe azo avy amin'ity bioloela ity dia ny tsy famokarana entona miantraika amin'ny fiakaran'ny tany.
Ity vokatra ity dia fomba iray hanararaotana ny biomassa amin'ny fomba maharitra, satria talohan'ny nandoroana na nanangonana ity fako ity ary tamin'ny habetsany be dia be no mety hahatonga ny faritra sasany ho mora tohina kokoa.
Este biofuel dia mandroso tokoa any Eropa, saingy antenaina fa amin'ny taona ho avy dia hitatra any amin'ny faritra hafa izy io satria manana vinavina tsara hanome famatsiana angovo amin'ny alàlan'ny fanoloana solika any amin'ireo sehatra indostrialy sasany na amin'ny taranaka herinaratra.
Ny fitaovana mora dia mora ary misy, saingy tsy ny firenena rehetra no manana biomassa ampy hahafahany mampivelatra sy mampihatra an'io loharanon-kery io, fa ireo manana izany kosa dia tokony hanararaotra izany.
Tombony iray hafa dia ny teknolojia sy ny fizotry ny famokarana pellet dia tsotra ihany ka tsy mila fampiasam-bola miavaka.
Raha misy famokarana pellet betsaka kokoa, izany dia hampirisika ny fananganana zavamaniry hafanana bebe kokoa izay omena an'ity biofuel ity ary amin'izany, hiteraka herinaratra madio sy tsy dia lafo.
Amin'izao fotoana izao dia misy safidy hafa madio kokoa hisolo ny solika raha tsy mila fiara sy finiavana bebe kokoa hanaovana izany izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Biomassa » Pellets ho loharanom-angovo